Olee otú iji tọghata M2TS ka DVD na M2TS ka DVD burner
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata M2TS ka DVD na M2TS ka DVD burner
M2TS faịlụ na-eji isi na Sony ngwaike. Ha na-isi metụtara AVCHD, nke bụ a usoro maka na ndekọ na playback nke elu definition video. Camcorders ka ojiji nke M2TS n'ụdị AVCHD, a na ndekọ format mere kpọmkwem maka camcorders. Ndị a faịlụ nwekwara ugbu na Blu-ray diski compilations, ya mere ha nwere ike nke na-akpakọba nnọọ nnukwu ego nke ọmụma na data tracks. Otú ọ dị, ị na-apụghị ekiri ndị a nkiri faịlụ na na DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ na TV. A ụda ngwọta bụ tọghata M2TS ka DVD. N'ebe a, anyị nwere ike ikwu na ị na a M2TS ka DVD burner - Wondershare DVD Creator (DVD Creator for Mac) na-enyere gị aka na akakabarede.
Nke a na usoro-abịa ihe nkenke na onye ọrụ-enyi na enyi interface, nke na-eme ka o kwe omume ọkụ video ka DVD na clicks. Ọ na-mbupụ gị nkiri ka DVD nchekwa, ISO Image, ma ọ bụ .dvdmedia, nke bụkwa a na-enye aka oke maka playback na mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ ọkụ na-DVD n'oge ọ bụla n'ọdịnihu. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ eji nke a usoro ike DVD si M2TS faịlụ. Free download ya ikpe mbipute ebe a.
Olee otú iji tọghata M2TS ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ
N'ebe a, anyị na-M2TS ka DVD burner Windows Version ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac ọrụ (Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 gụnyere), ị pụrụ ịgbaso yiri iji ọkụ M2TS ka DVD na Mac.
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu M2TS videos ka DVD burner
Kụrụ "Import" ịgbakwunye videos ka usoro ihe omume. Dị videos ga-egosipụta na thumbnails na ekpe. Ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe ịgbanwe video iji na preview vidiyo na nri. Atụmatụ: I nwekwara ike ịgbakwunye photos na-eme ka a DVD ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 2. Dezie M2TS videos
Nke a M2TS ka DVD Creator abịa na a wuru na-video nchịkọta akụkọ nke-enye gị ohere akuku, bugharia, tinye watermarks, mkpụbelata videos, wdg Imepe video nchịkọta akụkọ, ị nwere ike ma see edit button n'akuku video ma ọ bụ mata a video na nri pịa ya, mgbe ahụ, họrọ "Dezie".
Nzọụkwụ 3. Họrọ ma hazie DVD menus
Ị nwere ike ịhọrọ si preset 40 free DVD menu ndebiri maka mma DVD achọ. Ọzọkwa, ị nwere ike hazie DVD menu site na-agbanwe menu buttons, okpokolo agba, ndabere, thumbnails, wdg na-eme ka a na-ọzọ ahaziri. Ọ dịghị menu a na-akwado.
Nzọụkwụ 4. Preview na tọghata M2TS ka DVD
Ihuchalu DVD iji jide n'aka na ihe niile bụ ihe na-amasị gị. Mgbe niile ntọala, kụrụ "Ọkụ" iji tọghata M2TS ka DVD.
Na ọrụ Wondershare DVD Creator, ị nwere ike mfe tọghata M2TS ka DVD nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe nkiri gị na ezinụlọ gị n'ụlọ. N'okpuru ebe bụ video nkuzi:
Free download M2TS ka DVD burner:
Olee otú Mee DVD site na HD camcorder maka Nkịtị DVD Players
Breeki aka AVI: Olee otú Detuo DVD ka AVI Iji breeki aka